I-WordPress 2.1 ilapha… Hmmmm
NgoLwesibini, Januwari 23, 2007 NgoLwesibini, Januwari 23, 2007 Douglas Karr
Ijaji iphumile… ndiza kulinda abanye ukuba bangene kwiWordPress 2.1 kodwa nantsi eyokuqala:
Ndonwabile ukuba baphinde bathiya ezinye iinketho zemenyu- iblogroll yenza ingqiqo kunamakhonkco kunye nezimvo zingcono kuneengxoxo.
Ndikwi-OSX kwaye ndazama iibrawuza ezi-3, iSafari, iCamino kunye neFirefox 2 kwaye akukho namnye oya kundivumela ukuba ndikhangele imifanekiso endiyilayishileyo. (~ # ~) Hlaziya (~ # ~): Kwakhona wazama i-Intanethi Explorer 7 kwiWindows XP kwaye wayenengxaki efanayo.
Ummmm… qiniseka ukuba ukhubaza ii-plugins zakho ngaphambi kokuba uhlaziywe. Yhu… indawo yam yayiyindawo entle yomzobo apho iyure enye okanye ngaphezulu njengoko ndandisakha kwakhona.
Andinayo iplagi enye ethe yaqhekeka… kodwa ndaye ndavuseleleka kwakhona ukuze ndisebenzise enye nenye ukubuyisela indawo.
Ulawulo lubonakala luluvila kancinci… inokuba ndim nje. Ndiyawuthanda umsebenzi we-autosave !!!
Ukuba ndicofa uLawulo lweZilayishi… isikrini esingenanto ngokunjalo.
Nicinga ntoni nina? Ukungakwazi ukukhangela kunye nokufaka imifanekiso kuya kundibulala. (Ndiyakwazi ukuzilayisha ngaphandle kwengxaki). Andihlaziyi nabaphi na abathengi de ndive ezinye
I-OSX: Yenza iwindows yakho yesiphelo
IFirefox Hack: Khangela iBhlog yam usebenzisa iiKymark
Jan 23, 2007 kwi-11: 15 AM
Ndibambe ukuphuculwa okwethutyana de ndive okungakumbi. Sele ndifundile ukuphuculwa kwamabali awoyikisayo malunga neeplagi ezininzi ezingasasebenziyo.
Jan 25, 2007 kwi-9: 25 AM
Andikwazi nokungena kuLawulo ngoku. Kuya kufuneka ndenze iplagi ecinywayo ukuze ndibone ukuba iyanceda na.
Hlaziya nje… kuyabonakala ukuba bekukho imisebenzi yesiko kumxholo wam ongakhange uthathe kakuhle kulungelelwaniso ledatha.